श्रम बजारमा सङ्कट : कोरोनाका कारण १७ लाख रोजगारी गुम्दै
कृषि राेजगार पर्यटन समाचार
श्रम बजारमा सङ्कट : कोरोनाका कारण १७ लाख रोजगारी गुम्दै २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब
रमेश भारती काठमाडौं, २८ वैशाख
कोरोना भाइरसका कारण धेरै समय लकडाउन हुँदा आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा श्रमिकको कोटा कटौती हुने भएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिब १५ देखि १७ लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्ने रोजगारदाता कम्पनीहरूले बताउन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको एक अध्ययनमा आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत १७ लाख श्रमिकको रोजगारी कोरोना भाइरसका कारण गुम्ने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाहेक नेपालभित्रै काम गरिररहेका कामदारको कोटा कटौती हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले कोरोनापछि देशभित्र रोजगारी क्षेत्रमा समस्या, अवसर र बेरोजगारी समस्याका विषयमा हाल अध्ययन गरिरहेको छ । देशभित्र बेरोजारी समस्या सङ्कटका रूपमा देखापरिरहेको अध्ययनमा संलग्न आयोगका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । कोरोनापछि देशमा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारीदर नै देखिने उनको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको फैलावट नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक समस्या भोगिरहेका ठूला रोजगारदाता कम्पनी नै श्रमिक संख्या कटौती गर्ने पक्षमा रहेको विषयमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले समेत सरकारको ध्याकर्षण गराइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा करिब ३ अर्बभन्दा धेरै नागरिक केही समयका लागि बेरोजगार हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन (आईएलओ)को विभिन्न अध्ययनले बताइरहेको छ । आईएलओले नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी कटौती हुने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
नेपालमा समेत ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने आईएलओको अनुमान छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्दा धेरै रोजगारी संकटकमा परेको छ ।
कुनकुन क्षेत्रमा कति रोजगारी गुम्ने
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लकडाउन गर्दा आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । ३ महिनायता आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, जसका कारण लकडाउनमा बसेका ६० प्रतिशत श्रमिकले तलब नपाएको गुनासो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आइरहेको छ । जिफन्ट ले पनि यस विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइरहेको छ ।
यी क्षेत्रमा रोजगारी गुम्दै
पर्यटन क्षेत्रमा ४ लाख
होटलमा ३ लाख
कृषि क्षेत्रमा ३ लाख
गार्मेन्टमा २ लाख
सर्भिस सेक्टरमा २ लाख
शैक्षिकमा १ लाख २० हजार (कन्सल्टेन्सीसहित)
आउट सोर्सिङ कम्पनीका ८० हजार
रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा ९० हजार
साना तथा मझौला उद्योगमा ८० हजार
सवारी, यातायातमा ५० हजार
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६० हजार (सहकारी, फाइनान्स र मनी ट्रासन्फर)
सरकारी कार्यालयमा करार काम गरिररहेका ३० हजार
प्रविधि, सञ्चार र मिडियामा २५ हजार
रोजगारदाता कम्पनी, आयोजनाअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रतिष्ठान र अन्य व्यवसायमा अध्ययन भइरहेको आयोगका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
साढे १ महिना लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा रोजगारदाता कम्पनीलाई श्रमिक कटौती नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले श्रमिकलाई घरभाडा, राहतको व्यवस्था र रोजगारदाता कम्पनीले १ महिनाको तलब नदिए धेरै समस्या समाधान हुने ती कर्मचारीले बताएका छन् ।
सरकारले देशमा तत्काल ७ देखि १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले श्रम क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि योजना बनाइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी योजना ल्याउने उनको भनाइ छ ।
२५ लाख रोजगारी आवश्यक
कोरोना भाइरसको कहरपछि २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ । केही महिनायता अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडा नै आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्दै रोजगारी सिर्जनाका लागि विषयगत छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत रोजगारीका अवसर पत्ता लगाउन र बेरोजगारीदर अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रीसँग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले सबैभन्दा धेरै कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ता परिचालन गरेर बेरोजगारीदर अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भन्ने भिजन प्रष्ट नभएको श्रम तथा रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
सरकारले बेरोजगारीदर अन्त्य गर्न तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशभित्र उद्यमी उत्पादन गर्ने योजनाअघि सार्नुपर्ने विज्ञ डा. गुरुङले बताए । उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सबै युवा रोजगारीविहीन हुँदैनन् । उनीहरू नेपालमा फर्किएर केही गर्न सक्छन् । सरकारले उनीहरूको सिपका आधारमा व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।’
उनले भने, ‘श्रम र अर्थ मन्त्रालयको प्रयासले मात्र कोरोनापछि देखिने बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले व्यवसायी र अन्य सरोकारवालासँग सयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ । बेरोजगारीले देशभित्र विकृति भित्र्याउने खतरा बढ्छ । सरकारले बेलैमा यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’
देशभित्र आन्तरिक श्रम बजारमा करिब १७ लाख रोजगारी कटौती हुने विषयमा अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट करिब १० लाख श्रमिक फर्किए सरकारले २५ लाख रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्ने आयोगले औँल्याएको छ ।
सरकारले हाल आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको खोजीमा आएका ५ लाख श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । यसका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारीदर बढेर समस्या जटिल हुँदै जाने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २८, २०७७, १३:४८:००